भारतकी एक महिलाले काटिदिइन् श्रीमानको जननेन्द्रिय !
भारत । आफ्ना बालबच्चाकै अगाडि श्रीमानले मदिरा खाएर आवेगमा बलात्कार गर्न खोजेपछि भारतकी एक महिलाले श्रीमानको जननेन्द्रिय नै काटिदिएकी छिन् । आफूलाई मातेर अति गर्न खोजेपछि त्यसो गर्नुपरेको उनले प्रहरीसामु बयान दिएकी छिन् । उनीविरुद्ध प्रहरीले हत्याको अभियोगमा मुद्दा चलाएको छ । उनले भान्साको चक्कुले श्रीमानको जननेन्द्रिय काटेको प्रहरीसामु बताइन् । यो भारतको तेलांगना...
यो हो दुनियाँकै महँगो रक्सी, एक बोतलको मूल्य ४० करोड
यो संसारका अधिकांश मानिसले रक्सी पिउँछन् । के तपाईंले कहिल्यै जान्न खोज्नुभएको छ, दुनियाँको सबैभन्दा महँगो रक्सीको मूल्य कति होला रु अब तपाईंले दुनियाँको सबैभन्दा महँगो रक्सी कुन हो ?यसको मूल्य कति पर्छ ?र, यसको विशेषता के छ ?भन्ने कुरा थाहा पाउनुहुनेछ । बिलेनियर भोडका नामक मदिरा नै विश्वको सबैभन्दा महँगो रक्सी हो । यसको नामले नै बताउँछ कि यो अर्बपतिले पिउने भोड्का हो । यो...
सोफिया नाम गरेकी रोबोटलाई दिइयो पहिलो पटक साउदी अरबको नागरिकता (भिडियो)
एजेन्सी । सोफिया नाम गरेकी रोबोटलाई पहिलो पटक नागरिकता प्रदान गरिएको छ । यो खबर हो साउदी अरबको । विभिन्न धातु र तारको सहयोगले बनेकी सोफिया पहिलो नागरिकता पाउने मानव मेसिन बनेकी छिन् । साउदी अरबको संस्कृति तथा सूचना मन्त्रालय अन्तर्गतको सेन्टर फर इन्टरनेसनलले यसलाई एउटा ऐतिहासिक घटनाको रुपमा लिइएको छ । आधुनिकिकरणका लागि लगानी बढाउने विषयमा चर्चा हुन लागेको फ्यूचर...
लामखुट्टेले बनायो यस्तो हालतस् ३ फिट लामो लिंग, ५ किलोको अण्डकोष
अफ्रिकी मुलुक केन्याका एक २० वर्षे युवक इन्तु न चिन्तु बने जब उनको यौनांग बढेर ३ फिट लामो बन्यो । होरेस ओविटी ओपियो यस्तो रोगबाट ग्रस्त बनेकि उनको लिंग भटाभट लामो हुन थाल्यो । मूख्य यौनांग लामो हुनेमात्र कहाँ हो र रु उनका अण्डकोष पनि फर्सीझैं बढ्न थाले । ह्ँदा हुँदा अण्डकोष नै ५ किलोका भए । ३ फिटको लिंग र ५ किलोका अण्डकोष भएपनि उनको जीवन निकै नै कष्टप्रद बन्यो । उनका अनुसार,...
हिन्दु धर्ममा मृत्युपछि गरुड पुराण सुन्ने परम्परा छ । यस पुराणमा भगवान् विष्णुले आफ्नो वाहन गरुडलाई मृत्युसँग सम्बन्धित अनेकौं गोप्य कुरा बताउनुभएको छ । मृत्युपछि जीवात्मा कसरी यमलोकतिर जान्छ भन्ने कुराको विस्तृत वर्णन गरुड पुराणमा गरिएको छ । पढ्नुहोस्, गरुड पुराणका केही रोचक तथ्य : गरुड पुराणका अनुसार मर्न लागेको मान्छे बोल्न खोज्छ तर सक्दैन । अन्तमा उसका सबै...
महिलाहरु सेक्सपछि चरमसुखका बेला कस्ता देखिन्छन् (तस्विरहरु)
एजेन्सी, भनिन्छ, एउटा तस्विरले हजार शब्द बयान गर्छ । तर, अहिले यतिबेला एउटा फोटो श्रृंखलाले कुनै विषयको बखान मात्र होइन, एउटा दरिलो सन्देश दिन खोजिरहेको छ । यौन अहिले पनि वर्जित विषय मानिन्छ । महिलाको हकमा त यसबारे खुलेर कुरै गर्न मान्दैनन् । यौनबारे महिलाको बुझाई, चाहना र आवश्यकतालाई लज्जाको विषय बनाइएको छ । महिलाको यौनिकताबारे यही संकिर्णतालाई चिर्न ब्राजिलियन...
आइन्स्टाइनले कोरेका २ टुक्रा कागज २० करोडमा बिके
हेटौँडा, ९ कार्तिक, महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइन्स्टाइनले मनका कुरा कोरेका दुइ टुक्रा कागज २० करोड रुपैयाँ भन्दा धेरै मूल्यमा बिक्रि भएका छन् । इजरायलको राजधानी जेरुसेलममा भएको लिलामीमा आइन्स्टाइनले कोरेका कागजका टुक्रा करोडौँमा बिकेका हुन् । आइन्स्टाइनले खुसी जिवनका बारेमा एक हरफ लेखेको कापीको एउटा पाना झण्डै साढे १५ करोड रुपैयाँमा बिकेको छ । उक्त हरफ आइन्स्टाइनले...
एजेन्सी। कहिलेकाँकी गल्तीले हातमा रातो खुर्सानीको धुलो लाग्यो भने त्यसबाट जलन सहन निकै मुश्किल पर्छ। यस्तोमा तपाइँमा सोच्नुस् त कसैले महिलाको योनीमा रातो खुर्सानीको धुलो हाल्दियो भने कस्तो हुन्छ होला ? यस्तै घटना यतिबेला चर्चामा छ। जहाँ श्रीमानले आफ्नी श्रीमतीको योनीमा रातो खुर्सानीको धुलो हालिदिएका छन्। केही दिन अगाडि फेसबुकमा एक महिलाले एउटा फोटो पोस्ट गरिन्। जसमा एक...
मानव अनुहार विरालोको तस्विर भाइरल
एजेन्सी । फेसबुक, ट्वीटरलगायत सामाजिक सञ्जालमा केही दिनयता मानव अनुहार बिरालोको तस्विर भाइरल भइरहेको छ । मलेसियामा जन्मिएको दाबी गरिएको उक्त बिरालोको टाउको र आँखा भने मानवको जस्तो देखिन्छ । हाल उक्त बिरालोलाई ल्याबमा समेत राखिएको बताइएको छ । तर, तस्विर शेयर गर्दै सामाजिक सञ्जालमा दाबी गरिएजस्तो केही नरहेको मलेसियन प्रहरीको भनाइ छ । प्रहरीकाअनुसार अनलाइन बेच्न राखिएको...